Mwedzi mina Yemahara yeApple Music yeAmerican Mauto uye maVeterans | Ndinobva mac
Mwedzi mina Yemahara yeApple Music yeAmerican Mauto nemaVeterans
Zvekare, iyo Cupertino kambani inowedzera nyowani yekusimudzira kune yayo inomhanyisa mimhanzi sevhisi, Apple Music. Muchiitiko ichi, ndezvekupa sevhisi iyi mahara kwemwedzi mina kumauto eU.S. uye vese avo veterans veUS Army. Iyi mhando yekusimudzira iyo yakajairika muApple Hazvina kumbobvira zvaita kuti vatarise zvakanyanya paboka iri, asi isu tatoziva kuti muUnited States zvese zvine chekuita nekuda nyika, saka sarudzo iyi naApple haitishamise.
Mwedzi mina Yemahara yeApple Mumhanzi wemauto nemauto maVeterans
Kuti uwane iyi Apple Music kukurudzira, varwi vehondo nemauto vanofanirwa kuwana webhu kuburikidza neizvi kubatana. Muchikamu chino Apple inotsanangura kuti kodhi yekusimudzira inopera muna Nyamavhuvhu 1, saka vese vashandisi avo usati wanyorera kuApple Music sevhisi kare uye vari mukati meboka iri vanogona kunakidzwa nebasa panguva ino mahara.
Izvo zvinokwanisika kuti kupihwa uku kune hukama nezororo raChikunguru 4 ndosaka Apple yanga ichida kuipemberera neboka iri rakakura kwazvo munyika. Zvine musoro, kuti upinde uye unakirwe nechipo ichi, zvakafanira kunyoresa kubva kuID.me account, yechitatu-bato sevhisi iyo inopa zvidzikiso zvemauto nemavetera muzvitoro zvinoverengeka. Ndinovimba Apple inosarudza kuvhura yemwedzi mina yemahara Apple Music kukwidziridzwa munzvimbo zhinji uye ichi pasina mubvunzo isarudzo yakanaka kwazvo yekukwezva vashandisi kusevhisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Mwedzi mina Yemahara yeApple Music yeAmerican Mauto nemaVeterans
Kana hunyanzvi hwave mimhanzi. Iyi ndiyo furemu ine mutauri kubva kuIkea uye Sonos, Symfonisk
Isiri-inodzivirira ruoko rweglucose yemamitha mita yave kuitika